Shinlay: သူငယ်ချင်းဖတ်ဖို့ 
Posted by Shinlay at 18:18
ဒီမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ မ ရယ်..။ ကြုံရလွန်းတော့ အရေထူသွားတာလား..၊ နေသားကျသွားတာလား တစ်ခုခုပဲ..။
သူတို့က သူတို့အမြင်တွေက အာရှကလို့ ပြောရုံနဲ့ အထင်သေးပြီးဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒါတောင် ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ မတူပြန်ဘူး။ မြန်မာဆို ပိုဆိုးတယ်...
တို့အာရှသူတွေဟာ တကယ်ကြိုးစားရင် သူတို့ထက်သာတယ်ဆိုတာ သူတို့တွေသိကြပါတယ်...
Thank you for sharing your very well stated experience.
24 June 2010 at 04:57
မမရှင်လေးရေးထားတာလေးတွေက တကယ့်ကို ကြုံတွေ့နေရတာလေးတွေပါပဲ။
အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် မရယ်။ ကျေးဇူးပါနော် မ။
24 June 2010 at 07:22
ဟယ် အဲလောက် ဆိုးကြတာလား....။
မေးသင့်မမေးသင့် ပြောသင့်မပြောသင့် မချင့်ချိန်တတ်တဲ့ သူငယ်နာမစင်သေးတဲ့ သူတွေကို သနားလိုက်ပါ မမရှင်လေးရာ ......။
"ဒီမှာတခုကောင်းတာက သူတို့ က ကွယ်ရာမှာ အတင်းမပြောဘူး။"
အင်း... မမတို့ဆီမှာတော့ မသိဘူး။ ဒီမှာတော့ အင်္ဂလိပ်မတွေ သိပ်အတင်းပြောတာပဲ။ လူတစ်ယောက်လှည့်ထွက်သွားတာပဲ မကြာသေးဘူး အဲဒီလူရဲ့အကြောင်းကို ဘေးက သိပ်မသိတသိလူကိုတောင် အတင်းပြောဖို့ဝန်မလေးဘူး။ ပြောရရင်တော့ မိန်းမတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး ယောကျာင်္တွေလည်း အတူတူပဲ။ ရှေ့ကျရင်တော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ပြနေလိုက်တာ၊ မြောက်ပင့်နေလိုက်တာ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် ထင်မိတယ်။
ပြီးတော့ဟန်ဆောင်လည်းကောင်းကြတယ်။ ကိုယ်မကြည်တဲ့လူကို Professional ကျအောင်ဆိုပြီး ဟန်ဆောင်ချစ်ပြဖို့လည်း ၀န်မလေးဘူး။ ဒီရောက်ခါစဆိုရင် မျက်စိတောင်လည်တယ်။ စိတ်ထဲသူတို့ပြန်တည့်သွားကြပြီလို့ထင်တာ၊ နောက်ကွယ်လည်းကျရော ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာ အရမ်းပဲ။
ဒါပေမဲ့လည်း မမပြောသလို ရှေ့တည့်တည့်မှာပဲ ဝေဖန်တာကတော့ များပါတယ်။ constructive criticism ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။
တကယ်တော့ ဘယ်နေရာကပဲ လူဖြစ်လာ လူဖြစ်လာ လူဆိုတာကတော့ အတူတူပါပဲလေ။ ခံယူချက်ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်လေ။
အထင်သေးစိတ် အနည်းနဲ့အများ ရှိကြတာတော့ သေချာတယ်... ကြုံဖူးသူတွေ ပြောပြကြတယ်...ကိုယ်တိုင်တော့ အဲလိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး မကြုံဖူးသေးဘူး
မြန်မာနိင်ငံသားအချင်းချင်း နိမ်တာ အနိင်ကျင့်တာ ပိုပြီး၇င်နာခံစား၇ပါတယ်..
ဟုတ်ပါတယ်လေ Anonymous မမပြောသလို ဘယ်နေရာကပဲ လူဖြစ်လာ လူဖြစ်လာ လူဆိုတာကတော့ အတူတူပါပဲလေ.သူများလင်မယားကြား သူများမိသားစုကြား.သူများသမီး၇ည်းစားကြား.သူများအသိုင်းဝိုင်းကြား.၀င်အာ ၇မှစားဝင်အိပ်ပျော်တဲ့လူတွေ..
အများကြီးရှိတယ်.ငါကစေတနာနဲ့ ဘလာ.ဘလာ..လာမယ် နောက်တလွဲချဉ်း..
ရှင်လေးပြောတဲ့ကြုံတွေ့ ရမဲ့ အခက်အခဲ၊ ဘေးစကားတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး
လျစ်လျူရှုပြီး မိမိ ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားပါ.ဆိုတာ
အမရှင်လေးရဲ့စာတွေအားလုံးမှာ ဘဝဗဟုသုတတွေကိုရစေလို့ ကျေးဇူးပါအမရယ်..ဒီမှာတော့ အရှေ့တောင်အာရှ ကိုယ်စားပြုပြီးနေ နေရတယ်လေ..ဥပမာ:ဘယ်နိုင်ငံက ဟိုအသားဒီအသား(ပေါက်ကရ)တွေစားတယ်ဆိုတော့နင်တို့နိုင်ငံကလူတွေလဲအတူတူစားတာပဲမို့လား?ပြီး
တော့တို့အားလုံးက ဝမ်းတွင်သားမစားဘူး၊အရိုးမစားဘူးတဲ့ နင်တို့တွေကအကုန်စားတယ်နော်တဲ့ အဲ့ဒါ မနေနိုင်တော့တာနဲ့Liverwurst,Rotwurst တို့ Schweine Schäufele တွေက ဘယ်Tier တွေစားတာလဲလို့ လူကြီးတွေကို ပြန်ပြောမိပါလေရော...
အမ... တကယ်သာ ကိုယ်ကတော်နေတတ်နေရင် မနှိမ်ရဲပါဘူး..အမ။
ဘာပြောပြော ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်မပျက်ပဲ နောက်မဆုတ်သင့်ပါ။ ခေါင်းထဲကြာရှည်မထားပါနဲ့ ..အမသူငယ်ချင်းလေး အမရေးတဲ့စာတွေဖတ်ပီး လိုက်နာလုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာပါ။
သူငယ်ချင်းဆီရေးတဲ့စာက စေတနာအပြည့်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ တခြားလူတွေအကြောင်း ပြောတာ စဉ်းစားတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အရည်အချင်းရှိအောင် ကြိုးစားတာက နည်းလမ်းအမှန်ဆုံးလို့ ထင်မိတယ်။ မရှင်လေး စာတွေ ကြိုက်တယ်။ လာဖတ်အုံးမယ်။
ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ရတာ အရမ်းအားရှိပါတယ်၊
ညီမလဲ ကြိုးစားနေဆဲ အချိန်ပဲရှိသေးတယ်၊
ဒီမှာဆိုရင် အာရှသားကို သိပ်မမြင်ဘူးတော့၊ လူမြင်ရင်လိုက်လိုက်ကြည့်တာ အရမ်းစိတ်ညစ်မိတယ်၊
တခါတလေ သဘောကျတဲ့ပုံ၊ တခါတခါ အကြည့်တွေက စူးစူးကြီးတွေ၊
အနောက်ကို ဒီလောက်ထိ ထင်မထားမိဘူး။ လူဆိုတာတော့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အရပ်ဒေသက လူဖြစ်ဖြစ် လူ့စရိုက်တော့ ရှိမှာပဲလို့ တွေးမိပေမယ့်လေ...
ဘဝမှာ မအောင်မြင်တဲ့ မကျေနပ်နိုင်ကြတဲ့ လူတွေလို့ ဖတ်ရတော့လည်း သိပ်မထူးဆန်းသလိုပါပဲ။
စိတ်ညစ်နေတဲ့ အချိန် မရှင်လေးရဲ့ ဒီပို့စ်လေးဖတ်မိတယ်.. အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ ကြုံနေရတယ် သူ့ကိုပဲ ပြောရမလား ပတ်ဝန်းကျင်ပဲ ပြောရမလား မသိ..ခုက မြန်မာ အချင်းချင်းကြားမှာ ဆိုတော့ .. စိတ်ညစ်တာပဲ သိတော့တယ်..( လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ထားလို့ . ချစ်သူက မြန်မာပါပဲ)